Bevin သတင်းများ – Ernest Bevin ကောလိပ်
Bevin သတင်းများသက်တမ်းအချိန်ကာလအတွင်းတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်လပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ခရီးစဉ်၏ရေးသားမှု ups နှင့်ဓာတ်ပုံများတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အားကစားအောင်မြင်မှု. ဒါဟာမိဘတွေကိုအိမ်ကမေးလ်ပို့ပေးဖြစ်ပါတယ် (လုပ်သင်လက်ရှိတစ်ဦးမိတ္တူမခံမယူကြပါလျှင်သေချာကောလိပ်ကျောင်းရုံးခန်းသင်တို့အဘို့အရက်စွဲအီးမေးလ်လိပ်စာတခုဖွင့်ထားပြီး), သတင်းအောက်ရှိ app နဲ့ website ကိုမှ posted, သို့မဟုတ်သင်အဓိကဧည့်ခံနေတဲ့စက္ကူမိတ္တူကောက်လို့ရပါတယ်. If you have any news to be included or would like an electronic copy ofaphoto that appears of your child please email Mrs Wilkins fwilkins@ernestbevin.london.
Students, မိဘများ, Staff and Governors- lend me your ears!
Can I say with heartfelt thanks to all of you – မိဘများ, pupils, staff and governors- who persuaded the Department for Education to reverse its decision. ‘Well done to you all’. We got there in the end. . You have been amazing and it reaffirms my belief in the power ofacommunity to recognise that some wrongs must be challenged.
Statement about A Level Results from Ann Keane-Maher, ကျောင်းအုပ်ကြီး
Dhruv A* A A Economics at University College, လန်ဒန်
Zakariya A A B Computer Studies at King’s College, လန်ဒန်
အလုပ်အကိုင်ဌာနမှူး, Mr Clarke took part in an online debate organised by Jesus College, Oxford University and hosted by the writer and broadcaster Samira Ahmed. You can watch the debate by clicking the link above
Bevin သတင်း ၂၄ Aprilပြီ 2020
Bevin သတင်းများ 20th မတ်လ 2020
Bevin သတင်းများ 28 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
Bevin သတင်းများ 14 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
Bevin သတင်းများ 31 ဇန်နဝါရီ 2020
Bevin သတင်းများ 17 ဇန်နဝါရီ 2020
Bevin သတင်းများ 13 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2019
Bevin သတင်း 29 နိုဝင်ဘာ 2019
Bevin သတင်း 15 နိုဝင်ဘာ 2019
Bevin သတင်းများ 18 အောက်တိုဘာလ 2019
Bevin သတင်းများ 20th စက်တင်ဘာလ 2019
ဖီးနစ်မဂ္ဂဇင်း 2018- 2019
Bevin သတင်းများ 19 ဇူလိုင် 2019
Bevin သတင်းများ 5th ဇူလိုင်လ 2019
Bevin သတင်းများ 14 ဇွန် 2019
Bevin မဂ္ဂဇင်း, မေလ 2019
Bevin သတင်းများ 26 ဧပြီ 2019
Bevin သတင်းများ 29 မတ်လ 2019
Bevin သတင်းများ 15 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Bevin သတင်းများ 1st ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Bevin သတင်းများ 18 ဇန်နဝါရီ 2019
Bevin သတင်းများ 7th ဒီဇင်ဘာလ 2018
Bevin သတင်း 23 နိုဝင်ဘာ 2018
Bevin သတင်းများ9နိုဝင်ဘာလ 2018
Bevin သတင်းများ 12th အောက်တိုဘာလ 2018
Bevin သတင်းများ 21 စက်တင်ဘာ 2018